Savage နဲ့ အမျိုးသမီးဝတ်အတွင်းခံ line အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rihanna – FemaleWear.net
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Rihanna ကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fenty နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး တခြားနာမည်ကြီး brand တော်တော်များများနဲ့ collaboration လုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မကြာသေးခင်ကမှ သူမရဲ့ instagram ကနေ Savage x Fenty ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရင်ကတော့ သတင်းသဲ့သဲ့လေး ကြားမိပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောလဟလလို့ ထင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူမကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက် လုံးဝကို သေချာသွားပါပြီ။
သူမကတော့ လက်ရှိမှာ PUMA နဲ့လည်း collaboration လုပ်ထားပြီး သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် brand line တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fenty Beauty ကိုလည်း ပစ္စည်းသစ်တွေ ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ professional ဖြစ်တဲ့ အဆိုပိုင်းမှာသာမက စီးပွားရေးပိုင်းမှာပါ အောင်မြင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အခု collaboration လုပ်တဲ့ Savage x Fenty တို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းအသစတွေကို စောင့်မျှော်ရင်း ရင်ခုန်နေကြပါတယ်။
Sis said we bout to light this up! ?U ready for #SAVAGEXFENTY lingerie? Sign up at SAVAGEX.com